कस्ले चलायो नीता र आमेशबीच ‘प्यार’को अफबाह ? – YesKathmandu.com
बुधबार १९, जेठ २०७३
नेपाली सिनेमाको गुणस्तर खस्कनुका कारण के होला ? धेरै कारण मध्य एक हो,निर्माता/ निर्देशकहरु चलचित्र राम्रो बनाउनमा भन्दा त्यही अभिनित नायिका पट्याउनमा व्यस्त रहनु । सिने क्षेत्रमा ‘गसिप’ कसरी बन्छन ? र क्यारियर बनाउदै गरेका नायिकाहरुलाई त्यस्को दीर्घकालसम्म असर कसरी पर्दछ भन्ने यो एउटा उदाहरण मात्र हो ।
दीपकराज गिरी र दीपाश्री निरौलाद्धारा निर्मित ६ एकान ६ को निर्देशन गर्दै गर्दा निर्देशक दिनेश डिसी नीता ढुङ्गनाको ‘चक्कर’मा परे । यही कारण दिनेश दीपासँग सम्बन्ध विग्रियो । नीतालाई आफ्नो ‘पास’बाट टाढा जान नदिनका लागि फूलैफूलको मौसम तिमीलाई बनाए उनै नीतालाई नायिका बनाएर र नायकको रुपमा आमेश भण्डारीलाई डेव्यु गराए । दिनेशको एकोहोरो ‘प्यार’ थियो नीता प्रति । घर परिवार भाडिएला भन्ने डरले आवाजका दुनिँयाका साथीले हल्ला फिजाए ‘नीता र आमेश भण्डारी प्यारमा छन ।’
सबैको ध्यान त्यतै मोडियो । अहिले सिने बजार हल्ला चल्न थालेको छ, यो जोडीको प्रेममा खटपटी आयो । हुँदै नभएको ‘प्यार’मा कसरी खटपटि आँउछ ? उनै आवाजका दुनिँयाका साथी जानुन ।
सांसदका चिन्ता ‘जनताले हाम्रो टाउको फुटाँउछन,क्यारी जोगाउने ?
अभिनेत्री सेनिा जेट्ली गर्भवती
अमेरिकी राजदूत आइलिना टप्लिजलाई पनि लाग्यो तिज
आठ करोड पैसा तिर्न परेपछि सोम धिताललाई आयो हनहनी ज्वरो
दाङ क्षेत्र नं ३ बाट चुनाव लड्ने योजनामा कोमल ओली
‘राजेश पायलले प्रस्ताव राखे सेक्स गर्न तयार छु’
अङगीकृतका नाममा भारतीय आतंककारीले लिए नेपाली नागरिकता
फराकिलो मतान्तरले कीर्तिपुरमा एमालेले गाड्यो लालझण्डा,कहाँ कहाँ बाट आयो प्यानलै ?